March 5, 2016 - Written by admin
Maalinku geeriyooday Rasuulku ilaa maanta diintu halkeedi ayey taagan tahay; arrin wal oo aannu ogayn oo dib laga keenay Ilaahay wuxu u soo saara rag toosh ku muujiya oo u diida in saxar lagu soo kordhiyo diinta, sidoo kale waxna laga saaro oo mid kala dhantaalan ka dhigta.
Rabbi idil ahaantood raali haka ahaade, nin walba dhankii u muuqday in diinta tashuush laga galinayo ayuu u banbaxay inu difaaco. Calanka ragga waxa u siday Cumar ina Cabdicasiis oo xukunkiisi ka dhigay mid caddaalad ku dhisan.
Afartii imaam ee dhigaalada u sameeyey fahanka bud-dhigga u ah diinta ‘Fiqiga’ ayaa iyaguna door shariif ah ka qaatay ku toosnaanta xaqa. Raggii aqoon ruugga ahaa ee taariikhaha inoo ururiyey ayaa iyaguna ku lammaan oo u calanka u sido ina Kasiir. Sidoo kale Kasiir raggii ino kala dhigdhigay sharaxa Quraanka hormuud buu ka ahaa.
Ilaabi mayno doorkii muuqday ee ay lahayeen innamadii isu taagay hufidda iyo hubinta axaadiista iyo doorkoogi; Bukhaari, Muslin iyo ilaa maantada Ilaahay u soo saaray rag ka daba taga sugnaanta axaadiistaa oo Al-Baani ka mid yahay.
Sidoo kale raggii la dagaalamay khuraafaadkii lagu soo kordhiyey diinta ee aan salka lahayn ayaa iyaguna noqday rag sida xiddiga uga dhex muuqda dadyowgii kale. Raggaa waxa aynu ka magacaabi karna; ina Taymiya iyo Maxamed Cabdiwahaab.
Culimo badan baa jirtay oo ragga aynu tirinnay la saf ah sida; suldaankii culimada Cisi ina Cabdisalaan, Nawawi, ina Xasmi, ina Cabdi Bar, ina Mundir, Dahabi iyo rag door ah oo aynaan halkan ku soo wada koobi karin, Rabbi haku abaaliyo adeegidooda’e.
Raggaasi waxa ay wada dabaqeen xadiiski Suubbanuhu ku lahaa, “Korreeye boqolkii sannadood ba wuxu u soo saara ummaddiisa mid dib u soo nooleeye diinta.” Ee u soo saaray Daa’uud, Albaani xasanka ku sheegay.
Qof kasta oo tilmaantaa helay wuxu noqday mid u ban baxa inu noqdo mid difaaca qarnigaa been abuur diimeed oo la samaynayo sida; axaadiis aan jirin inu iftiimoyo beennimadooda. Waxqabadyo aan diinta waafaqsanayn inu ka digo samayntooda. Fahanno qalloocan oo diinta lagu luqin-jibaadhayo inu caddeeyo inay yihiin fikir gurracan. Aayaddo iyo axaadiis si khaldan loo macnaysanayo in u fahankii saxda ahaa ku soo celiyo iyo inu isku taago soo celinta hab-xukunkii suubbaha.
Qarnigna aynu joogno waa qarni ka duwan qarniyadii hore ee inna soo maray siyaasad ahaan; waa qarnigii ugu horreeyey ee Muslinku noo yahay hoggaan la’aan, waa qarnigii ugu horreeyey ee Muslinku meel wal oo uu joogo yahay mid itaal daran oo laga adag yahay.
Tataarku kolku qabsaday Baqdaad ee u dhiiga badan daadiyey, dawladdi Cismaaniyiintaa sii qabsanayey Ustandiiniya. Andalus kolkii ay gacanta Muslimiinta ka baxday dhulka hadda loo yaqaan Shishaan ayaa Muslimiintu qabsanayeen.
Labadaa dhacdo waxa aynu u soo qaadannay waa xilli la odhan karayey Muslinku quus buu taagna, haddana waadigaa arkaya inay wax sii noolayeen oo furasho iyo soo Islaamayni socotay. Maanta se garbo siman baa la yahay oo dhibta iyo eedaynta un baa lagu kala badan yahay ee dulinnimada waa la wada hadhsanaya.
Haddaba qarnigan Rabbi wuxu soo saaray halyeey qaab-fikirkaa ku baraarugsan oo isku taagay baraarujin inu ku sameeyo ummadda Muslimiinta oo uu u sheego sida xaal yahay iyo xalka lagaga bixi karaa inu yahay hoggaan mid ah oo la helo. Laakiin haddii qoloba ardaageeda iska doyeysato, kolka duul lala haadayana isha u marto in cid hadhaysaa aanay jiri doonin.
Tallo iyo tusaale ba waa xaggina